Ezigbo ihe nkwanye ụkwụ wiil LG936L
LG936L bụ onye na -ebugo ihe ma na -ebutu ihe rụrụ arụ, nwere ntụkwasị obi dị elu yana ọtụtụ ebumnuche, a na -ejikwa ya n'ọtụtụ ugbo, obere ebe a na -egwupụta ihe, osisi osisi na iwu obodo na wdg.
Asọmpi Ọkwa dị elu na -eburu L968F
Mmeghe uru: A pụrụ ịdabere na ya 1 、 Igwe eji ebu wiil nwere injin Weichai WD10G240E202 nke nwere ikike nchekwa dị elu, nnukwu torque, ike siri ike, oriri mmanụ dị ala, ịdị mma dị elu, ikuku na -adịchaghị ala. 2, VRT200 gearbox na -anabata ọnọdụ anọ na azụ anọ iji nye ọrụ nnyefe ka mma yana oke nnyefe nke ọnọdụ ihu n'ihu 1 na 2 n'ihi otu ọnọdụ ọzọ, na arụmọrụ ya zuru oke na -abawanye site na ...
Onye ama ama ama ama ama Wheel Loader L956F
L956F loader wheel bụ onye na -ebu ibu na ibudata ihe rụrụ arụ, yana ntụkwasị obi dị elu yana ọtụtụ ebumnuche, a na -ejikwa ya n'ọtụtụ ugbo, obere ụlọ ọrụ ogbunigwe, osisi osisi na iwu obodo na wdg.
SDLG akara moto Grader G9190
G9190 grader moto bụ ngwaahịa nwere oke ọsọ, arụmọrụ dị elu, izi ezi dị elu na ọtụtụ ebumnuche nke SDLG mepụtara na teknụzụ dị elu nke Europe, enwere ike iji ya maka idozi ala na ịkwa akwa, mkpọda mkpọda, bulldozing, ịkọ snow, ịtọpụ, kọmpat, nhazi ihe. na ịgwakọta ọrụ, a na -ejikarị ya arụ ọrụ na -arụ ọrụ nke okporo ụzọ, ọdụ ụgbọ elu, injinị nchekwa, iwu ogbunigwe, iwu okporo ụzọ, owuwu nchekwa mmiri na imezi ala ubi na ihe ndị ọzọ.
Akwa ụgbọ ala Grader G1965
G9165 moto grader bụ ngwaahịa nwere oke ọsọ, arụmọrụ dị elu, izi ezi dị elu yana ọtụtụ ebumnuche nke SDLG mepụtara na teknụzụ dị elu nke Europe, enwere ike iji ya maka ịdo ala na ịkwa akwa, mkpọda mkpọda, bulldozing, ịkọ snow, ịtọpụ, kọmpat, nhazi ihe. na ịgwakọta ọrụ, a na -ejikarị ya arụ ọrụ na -arụ ọrụ nke okporo ụzọ, ọdụ ụgbọ elu, injinị nchekwa, iwu ogbunigwe, iwu okporo ụzọ, iwu nchekwa mmiri na imezi ala ubi na ihe ndị ọzọ.
G9138F bụ ngwa ngwa dị elu, arụmọrụ dị elu, nkenke dị elu yana ngwaahịa dịgasị iche iche nke SDLG mepụtara mgbe nyochachara zuru oke nke ahịa chọrọ, nke nwere ike mezue ọkwa ala na trening, mkpọda mkpọda, bulldozing, mwepụ snow, ịtọpụ, mkpakọ, nkesa ihe, agwakọta. , wdg, a na -ejikwa ya n'ọtụtụ ebe n'okporo ụzọ, ọdụ ụgbọ elu, injinị na -agbachitere, iwu ogbunigwe, iwu okporo ụzọ, iwu nchekwa mmiri, nkwalite ala ubi na ọnọdụ ihe owuwu ndị ọzọ.
DH60-7 obere onye na-egwu ihe nwere arụmọrụ kwụsiri ike yana arụ ọrụ dabara adaba. Ọ na -anabata injin Yanmar nke Japan na -ebubata iji mezuo ụkpụrụ nsị nke ụlọ.
Mpi obere tipper gwongworo 6tons
Ụgbọ ala tụfuru bụ ụgbọ ala na -ebupute ngwongwo n'onwe ya site na mbuli elu nke hydraulic ma ọ bụ n'ibu. Ihe mejupụtara ya bụ chassis ụgbọ ala, usoro ebuli hydraulic, ibu akụrụngwa na ike na -ewere ngwaọrụ. A na -akpụzi okpokoro ụgbọ ala site na stampụ na nke a na -ekwe nkwa ike nke obe.
HDPE ụyọkọ ụyọkọ bụ ụdị mkpuchi micro-cable ọhụrụ, nke na-agwakọta 7-oghere 25/21 sub-tubes n'ụzọ ụfọdụ. Mpekere mpụta ahụ nwere akwa polyethylene dị elu nke 3.0mm, nke enwere ike ịbanye na oghere pere mpe. More oghere oghere na nchedo nke sub-akpa.
Truck Crane bụ ụdị igwe a na -ejikarị na ọdụ ụgbọ mmiri, ogbako, ọkụ eletrik na saịtị nrụpụta. The kreenu bụ a n'ozuzu aha hoisting igwe. Ọtụtụ mgbe a na -akpọ kreenu bụ kreenu akpaaka, krankị crawler na crane taya. A na -eji kreenụ na akụrụngwa mbuli elu, nnapụta mberede, mbuli elu, igwe, nnapụta.
Ụgbọ ala friza friji Van gwongworo
A na-ejikwa gwongworo friji akpọrọ dị ka gwongworo ndị na-ebugharị ụgbọ mmiri, na-ebuga ngwongwo na-eche oke okpomọkụ, n'ezie, nwere ụgbọ mmiri, friji ma ọ bụ friza arụnyere, agbanyeghị, ngalaba ndị a na-arụ ọrụ n'enweghị nsogbu na sistemụ eletriki na chaja nke ụgbọala.
1 Na-aga n'ihu na-ejikọ ọnụ ụzọ anọ jikọtara ọnụ nke ihe nchara etiti ọ bụla na-arụ ọrụ otu ahụ.